Tamaandho noocyo ah Ural | January 2020
Ugu Weyn Ee Tamaandho noocyo ah Ural
Easy iyo fudud: yaanyada Ural
Way adagtahay maanta in la qiyaaso beerta beerta hiwaayadda hiwaayadda, halkaas oo aysan jirin hal dhinac oo yaanyo ah. Khudraddani waxay qaadataa meesha sharafka miiska ay la socoto barandhada, qajaarka ama kaabajka. Xaaladaha dabiiciga ah ee Ural waxaa loo yiqiin karaa mid wanaagsan oo loogu talagalay beerista khudaarta cagaaran sida yaanyada. Laakiin weli, caanaha ayaa keenay oo sii wadaan inay soo saaraan noocyo in ay leeyihiin miro badan oo aan qabyo ahayn cimilada.
Sidee waxtar leh oo toon ah iyo sida loo kariyo
Waa maxay sababta guntan loo yaqaan 'deer deer'? Astaamaha Daryeelka Guriga
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka Cherry Lubskaya beertaada
Sida loo sameeyo saqafka weyn ee guriga, dusha iyo garaashka
In duurjoogta ah wuxuu ku koraa gobollada kalluunka. Sidaa darteed, waxay leedahay caudex, kaas oo qoyaanka uru. Geedka dhalada waxaa loo tixgeliyaa geedka aan qabin. Waxay ku kori kartaa iyada oo aan wax-ka-qabashada aadanaha. Nolosha Nolina - Waa maxay warshadani? Wuxuu cadeeyaa noocyada Agavaceae. Magaca Laatiin: Nolina. Magacyada aan rasmiga ahayn: geedka dhalada iyo qurxinta Bokareyn. Read More
Calathea medialion: sharaxaad, astaamaha daryeelka guriga
Sida loo isticmaalo guryaha bogsiinaya riigga ariga ee daawada dhaqanka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Tamaandho noocyo ah Ural 2020